Tanora ary mamoy fo, vonona hiondrana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2007 15:02 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 繁體中文, 简体中文, Español, 日本語, Français, English
Misy orinasa mpitady mpiasa ahiana ho sandoka nentina eo anatrehan'ny lalana any Madagasikara. Gateway Global Consultants, tarihin'izany Steve Turmel izany, milaza fa mpanolo saina maneran-tany, dia nahazo fandrarana hialana an'i Madagasikara , fa nampanantena Malagasy ana arivony asa any Bahamas ao amin'ny « West Palm Textiles and Garnments», raha mameno fombafomba sasantsasany : maka vaksiny miady amin'ny hepatite B, tazo mavo, maka pasipaoro ary mandoa ny vola fehin-draharaha 240 000 Ar (eo amin'ny $93 eo ho eo, vola be amin'ny tany izay ny habetsahan'ny mponina dia miaina amin'ny $1 isan'andro).
Nihoatra ny 3000 ny nirotsaka te handeha, rehefa avy nanamidy izay entana nananany (radio, TVs, tanimbary) mba handoavana io vola io. Ny sasany moa latsaka an-ketra, ny sasany niala tamin'ny asany. Gateway Global Consultants nandray ny taratasin'ireo te handeha tao anatin'ny birao vonjimaika tanaty tranon-tsekoly. Ankehitriny efa mihidy io birao io. Nanontanian'ny fitondrana malagasy ny fitondrana tany Bahamas ka nilaza fa tsy misy an'izany « West Palm Textiles and Garnments» izany. Ny Gateway Global Consultants company koa moa tsy mahalala an'i Steve Turmel. Kanefa mbola maro ireo te handeha no mbola manantena hiainga amin'ny elanelan'ny volana Septambra.
Harinjaka miantso antsika mijery ity toe-javatra ity manisy rohy amin'ny Tribune Madagascar, takelaka gazety malagasy.
Jentilisa manontany tena hoe izao ve no porofon'ny finoanoam-poanan'ny Malagasy mamoy fo te hahazo asa sy mihevitra fa ny fiainana any andafy no tsara kokoa, na anatin'ny fomba fiaina hafahafa ratsy indrindra ary.
Ary dia nadikanao ihany ilay izy an!
20 Septambra 2007, 15:48
ye, tena tsy nanaiky mihitsy ny rantsa-tanako raha tsy nandika azy…
21 Septambra 2007, 11:46